musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » ushanyi » Lake Powell Inonyangarika: Zvinosuruvarisa kutashanyi!
Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Shanduko yemamiriro ekunze yakangova yechokwadi uye nyaya hombe kune indasitiri yekushanya kuLake Powell, imwe yenzvimbo dzinozivikanwa kwazvo dzekushanyira muArizona neUtah, USA.
Shanduko yemamiriro ekunze rave chairo muArizona uye Utah neLake Powell mudambudziko
PaLake Powell rwizi rwemvura rwakadonhera kune yakaderera nhoroondo, ichitora mutoro unorema pane indasitiri yemuno
Lake Powell idziva rakagadzirwa nevanhu paColorado Rwizi muUtah neArizona, United States. Iyi inzvimbo huru yezororo inoshanyirwa nevanhu vangangosvika mamirioni maviri gore rega rega.
Ichi ndichiri chiziviso pane Lake Powell kushanya Website:
Isu tinofara kugamuchira vaenzi kudzokera kuLake Powell uye tinotarisira kushanya kwako. Ndokumbira kuti uwane ruzivo rwakagadziridzwa maererano neshanduko kune edu mashandiro uye masevhisi panguva ino sezvatinovhura zvakare.
Hutano nekuchengeteka kwevashanyi, vashandi, vanozvipira, uye vanobatana paLake Powell ndiyo yedu yekutanga kukosha. National Park Service (NPS) iri kushanda mushevhisheni pamwe nehurumende, nyika, uye zviremera zvemuno kuona kuchengetedzeka kwevaenzi vedu nekutevera nhungamiro dzehutano dzakagadziriswa.
Mamiriro ekunze ari kuwedzera kupisa uye kuoma uye moto njodzi iri kuwedzera zuva nezuva. Vashanyi vanofanirwa kushandisa yekuwedzera kuchenjera kudzokerazve kuruzhinji nzvimbo kana njodzi yemoto ichiwedzerwa.
Mitemo yemoto inokonzerwa nekuwedzera njodzi yemoto uye kudiwa kwekudzivirira moto wemunhu panguva dzinogona kuita njodzi, kusimudzira hutano hweveruzhinji nekuchengetedza, uye kuchengetedza zviwanikwa. Wadzima moto uye chengetedzo yeruzhinji zvinoramba zviri pamberi pekutanga panguva yemoto wemusango.
Kuti udzidze zvakawanda pamusoro pemitemo yemoto kune dzimwe nyika dzevanhu muArizona neUtah, tapota shanya www.wildlandfire.az.gov uye www.simfireinfo.gov. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve moto wemusango pasirese, shanya inciweb.nwcg.org.
Lake Powell iri kuchamhembe kweArizona uye inotambanukira kumusoro kumaodzanyemba kweUtah. Icho chikamu cheRwizi rweColorado muGlen Canyon National Recreation Area. Iine mamaira angangoita zviuru zviviri zvemhenderekedzo yegungwa, kupenya kwezuva kusingaperi, mvura inodziya, mamiriro ekunze akakwana, uye dzimwe nzvimbo dzinoyevedza kumadokero, Lake Powell ndiyo inzvimbo yekutamba yekupedzisira. Roja igwa reimba, gara pakamba yedu yemusasa, kana kunakidzwa neimba yedu yekugara uye svetukira muchikepe chinotungamirwa.
Iyo National Park Service yakazivisa nekukurumidza kutanga kwemwedzi uno kuti zvikepe zveimba hazvichakwanise kushandisa iyo Wahweap Launch Ramp, nzvimbo inotyisa kuburitsa zvikepe munzvimbo iyi. Mabhoti akatokandirwa mumvura akayambirwa kuti vaive neisingasviki vhiki kuti vadzokere kumhara kana njodzi yekukanganiswa.
Guta diki rePage rine huwandu hwevanhu mazana manomwe nemazana mashanu uye vasina imba yekuvakisa, indasitiri yekushanya haina zvakawanda zvingagone kuita iri diki diki rine simba kumhanya. Idambudziko renharaunda yePage.
Nepo shanduko yemamiriro ekunze yakawedzera moto wemusango, mafashamu emvura, nemafashama emvura muzhizha rino, iri kutora mutero unorema paindasitiri yekushanya inoenderana neLake Powell. Vhiki rapfuura mutsetse wemvura wakasvika pazasi enhoroondo ye3,554ft, danho risati raonekwa kubvira 1969 pakagadzikwa dhamu. Iyo hombe dura iri parizvino makota matatu isina chinhu uye icharamba ichidonhedza zvirinani kuburikidza neanotevera matsutso nekuda kwekurekodha yakaderera snowpack mazinga muColorado River basin.
Kunze kwechinomwe chikepe chevoruzhinji chinotangisa nzira kuLake Powell, chete Bullfrog kumaodzanyemba kweUtah ndiyo inogara yakavimbika inoshanda nekuda kweakawanda akateedzana ramp anowedzera. Asi izvozvowo zvinogona kukurumidza kusasvika.
Sekureva kwemushumo mupepanhau reUK-based Guardian pepa, Iyo Bureau yeReclamation yeUS inofungidzira kuti pane mukana we79% Lake Powell inodonhedza imwe 29ft kubva kune yazvino nhoroondo yepasi "imwe nguva gore rinouya".
Sekureva kwemushumo weNational Park Service, Glen Canyon aive nevashanyi vanosvika mamirioni 4.4 muna 2019, ichiita imwe yemapaki anoshanyirwa kwazvo munyika. Vashanyi vakashandisa $ 427m muPage nenzvimbo dzakatenderedza uye vakatsigira mabasa 5,243, kusanganisira kupa sosi yakakosha yebasa kuNavajo Nation iri pedyo.
Iko kune mukana wakakura weimwe mikana yekuvaraidza mumativi emakoroni anobuda muLake Powell.
Iyo indasitiri yezvikepe inobvuma kuti nzvimbo dzichangowanikwa dzinowanikwa muGlen Canyon idanho hombe revashanyi.